ကိုဖက်တီးကပ် (ခ) ကိုသော်ဇေယျာ အသက် (၃၂)နှစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုဖက်တီးကပ် (ခ) ကိုသော်ဇေယျာ အသက် (၃၂)နှစ်
ကိုဖက်တီးကပ် (ခ) ကိုသော်ဇေယျာ အသက် (၃၂)နှစ်
Posted by Thuyazaw on Aug 29, 2012 in Creative Writing | 78 comments
သြော် ရွာထဲမှာ ဘာလိုလိုနဲ့ ဖက်တီးကပ်တစ်ယောက် ၃၂ နှစ်ပြည့်မြောက်မယ့် မွေးနေ့လေးကို ရောက်ရှိလာခဲ့လေပီ….. ဒီလိုအချိန်အခါသမယမှာ ဖက်တီးကပ်တစ်ယောက် ဘာတွေစဉ်းစားပီး ဘာတွေလုပ်နေမလဲ…… ကျွန်တော်တွေးကြည့်မိတယ်လေဗျာ….. သူ မီးဖိုထဲမှာ ရှိနေမလား….. ဒါမှမဟုတ် သူ့ချစ်သူမိန်းမရဲ့ အနားကွေးနေမလား….. ဟောဟဲ ဟောဟဲ နဲ့ဖြစ်နေလေမလား….. ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေကျွေးလို့ ကုန်ကျမယ့်စရိတ်အတွက် အိမ်ဂရံလေးပဲ ပြေးပေါင်နေပလားပေါ့နော်……….. အတွေးများစွာဖြင့် ချာချာလည်နေမိပါတယ်…….. သြော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကိုဖက်တီးကပ်ရဲ့ ၃၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးမှာဖြင့် ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ၊ ထီပေါက် နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းအလို့ငှာ ကျွန်တော် မောင်သူရဇော်မှ ဂေဇက်ရွာသူ/သားများ အားလုံးကိုယ်စား ဒီပို့စ်လေးနဲ့ HAPPY BIRTHDAY လေးကို ကြိုဆိုလိုက်ပါကြောင်းခင်ဗျာ………..
ယနေ့မှစ၍ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ထိန်းသူ မဇင်လေးနှင့်အတူ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ၊ ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ခရီးကို အတူလက်တွဲ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်းများနှင့်အတူ ကိုဖက်တီးကပ် (ခ) ကိုသော်ဇေယျာရေ
H A P P Y B I R T H D A Y ဗျာ……….
happy birthday ပါ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ ၃၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်မွေးနေ့၁၂၀ တိုင်အောင်
အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး လိုတဲ့အရာမှန်သမျှ မတောင်းပဲပြည့်စုံ ပါစေလို့…။
အိုး…..ကိုဖတ်ကတ်က အခုမှ သုံးဆယ့်နှစ်နှစ် ပြည့်မှာတဲ့လား ကိုသူရဇော်။
ကျွန်တော် ကိုဖတ်ကတ်ကို အဲသလောက်ကလေးပဲရှိမယ်လို့ တကယ်မထင်ထားဘူးဗျာ။
၂၃နှစ်လောက်ကြီးများတောင်ရှိနေပြီလို့ ထင်ထားတာ။……. အဟဲဟဲ……..။
ကြောင်ဝကြီးရေ ….မွေးနေ့မှစ ဘ၀တစ်သက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေဗျာ ……….။
သာသနာ အရေး ဆထက်တံပိုး ထွန်းပေါက်အောင်မြင် ကြိုးပမ်းနိူင်ပါစေ ……
ကျွန်တော့်မွေးနေ့မှာ အားပါတရ… ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ၀မ်းသာအားရဆုတောင်းပေးကြသော…
အစ်ကိုပီချိုကြီး၊ အစ်ကိုကြီးအညာတမာ၊ ကိုရင်မောင်၊ အဘဖော၊ အန်တီအေးကေကေ၊ ကိုရဲရင့်လှိုင်၊ ကိုပေ၊ မငုံ၊ သူငယ်ချင်းကြီးမဟာအံစာတုံး၊ ကိုနေ၀င်းနီကြီး၊ ကိုထူးသင်၊ ဦးဦးနေးချား၊ သူငယ်ချင်းမယ်ပုခ်ျ၊ လေးစားရပါသောကျွန်တော့်အရီးလတ်… တစ်ခါပဲတွေ့ဖူးသောကိုအလင်းဆက်… ညီမငယ်မေဖလားဝါး… ကိုမင်း…
နောက်ကျမှအမီရောက်လာသော အစ်ကိုကြီးဆာမိ…. ပျောက်နေရာမှ ပြန်ပေါ်လာသော သောက်ဖော်သောက်ဖက်ညီနောင်ကိုရဲစည်… ကြောင်စီနီယာ ကိုကြောင်ကြီး…
အဟီး ..ရိုက်တဲ့ လူရော .. ကတဲ့ လူရော …. အတူတူကို .. ဘူဘူချင်း တစ်လုပ်ချင်နေတယ် … ။
birthday kiss ကို မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယို မရိုက်လိုက်မိတာ … နာတယ်ကွာ .. ခွိခွိ
ဟီးဟီး…သုံးခါလောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်….. သမီးတောင် အက လာသင်ရင်ကောင်းမလားလို့…
ဆရာကိုရွှေတိုက်စိုးက… သူ့အကကို ၀ါသနာအရကတာပါတဲ့…
သင်ချင်တဲ့လူတွေရှိရင်… သူ့ပညာကိုအခကြေးငွေမယူဘဲ ဖြန့်ဝေပါမယ်တဲ့… ဆက်သွယ်ကြပါခင်ဗျား…
ဟိုက်ရှားပါ.. သတင်းကောင်းပဲ…. ဖြန့်လိုက်မယ်….
တော်လိုက်တဲ့ ကိုရွှေတိုက်စိုးပါကလား။ ချစ်သူငယ်ချင်းကြီးရဲ့ပွဲမှာဂုဏ်ပြုပေးတာပေါ့
ကတိုက်စိုးရဲ့ က,ချက်ကတော့ အလန်း ပဲ ..
ကိုကြောင်ဝတုတ် က သူ့မွေးနေ့မှာ
ဝမ်းမန်းရှိုးနဲ့ တင်ဆက်ခဲ့တာကိုး …
ဘာ အမကြီး ရို့စ် ဟုတ်စ။ ဟွန့် ဒီနေ့တော့ ကြောင်စာငတ်ပြီမှတ်ပါ။ မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင် မပေးတဲ့ အပြင် ကြောင်စာပါငတ်ပြီ။ ဒါပဲ ဒါပဲ။
အန်တီ ရိုစ့် ပြောပါတယ်..
အရင်က သူက ကကြောင်ဝတုတ် ကို ကြောင်စ ကျွေးတယ်ပေါ့…
ဟုတ်စ… …(ခုကစ ငတ်ပီဆိုလို့ပါ …ခိခိ..)
ဟို အပေါ်က အန်တီ နွယ်ဘင် ပြောပုံကလည်း ကြည့်အုံး..။
သူ့ဟာသူ သူ့ချစ်ချစ် သူ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်ပေါ့ …
ချစ်ဇနီးလေး နဲ့ လောက်ရေးရင် တော်ရောပေါ့..
နာမည်ပါ ထည့်ရေးတော့ ချစ်ဇနီး ငယ်လေး ဆိုတော့ …
(ငယ်ငယ်က ယူခဲ့တဲ့ ဇနီး မို့ ..ဇနီး ငယ်လေး..)
ကြီးမှ နောက်တယောက် ထပ်ယူရင် ..ချစ်ဇနီး ကြီး .. ဂလိုလား…
သူတောင် အုံးကျုံးဆိုနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ကော်ပီ ဆိုနေပီး..
သူများကျ အုံးကျုံးကို ဒါဇင်လိုက် ထုတ်ခိုင်းနေတယ်…
တကလဲ တော် .တကလဲတော်..
ကိုဖက်ရေ ပိုစ့်လေးကို အခုမှမြင်လို့ ဆုတောင်းပေးတာတောင် နောက်ကျသွားတယ်
မွေးနေ့၇ှင်ကျွေးတဲ့ မုန့်ကိုတော့ မနေ့က အားပါးတရ စားသောက်ပြီး အခုမှ ဆုတောင်းပေးရတာကို
အားနာပါတယ် . အသက် (32) မြောက်မွေးနေ့မှ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ချစ်ဇနီး ငယ်လေးနဲ့
အတူတူ သာယာပျော်၇ွှင်ချမ်းမြေ့သော နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော သားသားမီးမီးလေးတွေ ရ၇ှိနိုင်ပါစေ ….
ံHappybirthday ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ နောက်တောင်ကျနေပီ ခရီးထွက်နေလို.ပါ
အခုလို ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ… ညီမလေးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ…
နောက်မကျပါဘူးဗျာ… နောက်အခွင့်အခါများသင့်ရင် ဆုံချင်ပါသေးတယ်… မွေးနေ့ညစာစားပွဲ (သောက်ပွဲအဓိက)ကို လက်လှမ်းမီရာ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုဖိတ်ပါတယ်… မနေ့ညပွဲမှာ ဂေဇက်ဝင်တွေချည်းပဲ ၉၀% ပါဗျာ… နောက်တစ်ခါအခုလိုဆုံဖြစ်အောင်… ထပ်မံကြိုးစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်ပါတယ်… ထပ်မံလဲဆုံကြဦးမှာပါ….
အစ်မဖုန်းကိုလဲမှတ်ထားပါ့မယ်… နောက်တစ်ခါဆိုရင် ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါ့မယ်နော်…
နောက်ကျသွားလို့ဆောရီး happy birth day ပါ
ဒီနေ့ပါ ဘတ်ဒေးလုပ်ရင် ကောင်းမှာပဲနော်
မနေ့က ကြေးအိုးလေးတစ်ပွဲပဲစားလိုက်ရတယ် ဟင့်
Happy Birthday! Cat fatty
အမြဲပျော်ပျော်နေတဲ့သူမို့ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ထပ်ဆုမတောင်းတော့ပါဘူး..
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး နောက်ထားတာ ထင်လို့။
ပေးတဲ့လင့်ခ်ကို နောက်ထားတာ အောက်မေ့လို့။
အသက်ငယ်ငယ် အသိကြွယ်ကြွယ်နဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ယနေ့ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည်…
လက်တွဲဖော် (အင်းးးးးးး သူလည်း အုပ်ထိန်းသူလားမသိ) နဲ့အတူ
ဘ၀ကို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
(သူရဇော်ရေ ခေါင်းစဉ်ကြီးက တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်နော်။ တမင်သက်သက် ချစ်လို့ စ ထားတာ ထင်ပါရဲ့)
” သူငယ်ချင်းတွေကျွေးလို့ ကုန်ကျမယ့် စရိတ်အတွက်
အိမ်ဂရံလေးပဲ ပြေးပေါင်နေပလားပေါ့နော် ”
ကြားရတာ စိတ်တောင် မကောင်းဘူး ။
Happy Birthday ပါ ကို ကြောင်ဝတုတ် ရေ ။